Habab cusub oo hagaajinaya caafimaadkaaga sanadka 2019 | Radio Himilo
Home / Caafimaad / Habab cusub oo hagaajinaya caafimaadkaaga sanadka 2019
Habab cusub oo hagaajinaya caafimaadkaaga sanadka 2019
Posted by: Mahad Mohamed January 1, 2019
Himilo FM – Dhalashada sanadka cusub, waxay u badan tahay inaad ka fekirayso horumarinta wax badan sida caafimaadkaaga oo ay tahay inaad ilaaliso. Sida caadiga ah, inta badan waxay talada caafimaadka ku soo uruurtaa samey socod badan, miisaankaaga oo aad yareyso iyo cunto fiican oo aad qaadato hase ahaatee waxaa jira kara habab kale oo ka fudud.
Khubaro ayaa la weydiiyay waxa keliya oo ay kula talin lahaayeen qof kasta si uu u hagaajiyo caafimaadkiisa iyaga oo ka soo qaadaya qof caafimaad qaba islamarkaana aan sigaar cabin.
1. Kobci maskaxdaada
Way fududahay inaan ka fekerno caafimaadka jirkeenna hase ahaatee Drs Nadine Sammy oo katirsan jaamacadda University of Exeter waxay la tahay in qofku xoogga saaro kobcinta maskaxdiisa isaga oo dhisaya wacyigiisa qofeed.
Wacyiga qofeed waa awoodda uu qofka ku aqoonsado kuna fahmo xaaladihiisa, dareenka heysta iyo waxa ku riixaya. Waxay kaalin wanaagsan ka qaadan kartaa kobcinta caafimaadka maskaxeed iyo midka jirreed ee qofka.
“ Markaad fahanto dareenadaada iyo dhaqankaaga si qoto dheer, waxaad qaadan kartaa go’aano u wanaagsan naftaada,” ayay tiri Drs Nadine.
Tani waxay ku imaan kartaa inaad la sheekeysato naftaada markasta oo aad qabato shaqo maalintii sida ay qabto Drs Nadine.
2. Cunto ceyn kasta leh
Waxaan horay u maqalnay in cuntada iyo khudaarta loo qaato si maalinle ah balse Dr Megan Rossi waxa uu tilmaamayaa inaysan macno sameyneyn inaad qaadato cunto ama khudaar hal nuuc ah maalin walba. Waxa uu leeyahay waxaa wanaagsan in qofka isticmaalo khudaar ceyn kasta ah. Waxa uu tusaale ka dhigay in qofka uu qaato cunto leh 30 nuuc toddobaad kasta.
3. Dhoola caddeey marwalba
Dr Grill ayaa ku talinaya si qofka isbadal ugu sameeyo noloshiisa inuu u baahan yahay in uu dhoola caddeeyo markasta. Waxaa kale oo muhiim ah inaad oggaato waxa aanan ku farxad gelineyn si aad uga fogaato.
Previous: Roberto Martinez oo Eden Hazard kula taliyay in uu sii joogo Chelsea.
Next: Musharixiinta u taagan abaalmarinta xiddiga sannadka Afrika oo la shaaciyay